One More Light (သီချင်း) - ဝီကီပီးဒီးယား
Linkin Park ၏ Single သီချင်း
One More Light အယ်လ်ဘမ်မှ
၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇
(၂၀၁၇) "One More Light"
"One More Light" သည် အမေရိကန် ရော့ခ် ဂီတအဖွဲ့ Linkin Park ၏ သီချင်းဖြစ်သည်။ ထိုသီချင်းသည် Linkin Park၏ ၉ ခုမြောက် အယ်လ်ဘမ် (၇ ခု မြောက် စတူဒီယို အယ်လ်ဘမ်) One More Light မှ ခေါင်းစီးတေးဖြစ်သည်။ ထိုသီချင်းသည် ကင်ဆာရောဂါနှင့် ဆုံးပါးသွားသော အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးအကြောင်းဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လူမျိုး တေးရေးဆရာ Eg White နှင့် တွဲဖက်ရေးသားထားသည်။ "One More Light" ကို US contemporary hit radio တွင် အောက်တိုဘာ ၃ ရက်၊ ၂၀၁၇ တွင် အယ်လ်ဘမ်၏ တတိယမြောက် သီချင်းအဖြစ် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ Chester Bennington ကွယ်လွန်ပြီးမှ ဖြန့်ချိခဲ့သော တတိယမြောက်သီချင်းလည်း ဖြစ်သည်။
၅ Release history
၂၀၁၆ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် Shinoda သည် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး တေးရေးဆရာ Eg White တွဲဖက်လုပ်ကိုင်နေကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ အယ်လ်ဘမ်၏ အဓိကသီချင်းဖြစ်သော "Heavy" အကြောင်းပြောဆိုထားသော အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် Shinoda က "One More Light" အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ White ရေးမည့်အကြောင်းအရာကို မေးသောအခါ၌ Shinoda က ဆုံးပါးသွားသော သူငယ်ချင်းအကြောင်းဟု ဖြေဆိုခဲ့သည်။ Shinoda က သို့သော် ထိုသီချင်း အကြောင်းအရာသည် ဆိုးဝါးသောဆုံးရှုံးမှုအစား မိမိ၏ ဂရုစိုက်မှုကို အခြားသူများအား သိစေလိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ 
နောက်ပိုင်းတွင် ထိုသူငယ်ချင်းဆိုသူသည် Warner Bros. Records တွင် ၂၅ နှစ်ကြာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော ၂၀၁၅ အောက်တိုဘာတွင် ကင်ဆာဖြင့် ဆုံးပါးသွားခဲ့သူ Amy Zaretဖြစ်ကြောင်း Mike က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ကျွန်တော်တို့မှာ ကုမ္ပဏီအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သလို ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူရှိခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူက ရေဒီယို ကြော်ငြာအစီအစဉ်တစ်ခုမှာ စတင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သူပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို အမေရိက အနောက်အလယ်ပိုင်းက ရေဒီယို အသံလွှင့်ရုံဆီကို ကားမောင်းပို့ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ တဖြည်းဖြည်း ရာထူးမြင့်မားလာခဲ့ပါတယ်။ မနှစ်က ရုတ်တရက် သူကင်ဆာဖြစ်နေကြောင်း ကြားခဲ့ရပြီးနောက် ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲ သူဆုံးပါးသွားခဲ့တယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ မဖြစ်မနေရေးသင့်တာဗျ။ ဒါက အဆွေးသီချင်းဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ရလိုက်တာက ဒီလို စိတ်ထိခိုက်နာကျင်ရတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ အရေးတကြီးလုပ်ရမှာက ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး သူတို့ကို ကိုယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာ သတိပေးဖို့ပါပဲ။" ”
Linkin Park ၏ သီချင်းသည် Warner ၌ အလုပ်လုပ်နေသူများကိုပင် အံ့အားသင့်စေခဲ့ပြီး အချို့မှာ မျက်ရည်မဆည်နိုင်ဖြစ်ကာ သူ့အကြောင်းကို ပြန်ပြောပြကြကာ ထိခိုက်ခံစားခဲ့ကြရသည်။ ထိုသီချင်းကို Amy Zaret ထက် တစ်ရက်စောကာ ဆုံးပါးသွားခဲ့သူဖြစ်သော Chris Cornell အတွက်ရည်ရွယ်၍လည်း TV အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သော Jimmy Kimmel Live! တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
ပင်တိုင်အဆိုတော်ဖြစ်သော Chester Bennington သည် ၂၀၁၇ ဇူလိုင် ၂၀ တွင် အဆုံးစီရင်ခဲ့ပြီးနောက် အဖွဲ့သည် "One More Light" ကို နောက်ထပ်ထုတ်လွှင့်မည့် သီချင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ "One More Light သည် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများအတွက် ချစ်ခြင်း မေတ္တာများ ဖြန့်ဝေဖို့ ရည်ရွယ်ရေးသားခဲ့တာပါ။ အခုတော့ ကျွန်တော်တို့က ဆုံးရှုံးရတဲ့လူတွေ နေရာက ဖြစ်နေတယ်။ အမှတ်တရ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ အနုပညာ၊ ဗီဒီယို၊ ပုံရိပ်တွေက အဖွဲ့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း Chester အပေါ်ထားရှိတဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ထောက်ပံ့မှုတွေပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အလွန်ပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပြီး ထပ်မံတွေ့ဆုံဖို့ မစောင့်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ" ဟု Shinoda မှ ရေးသားခဲ့သည်။.
"One More Light" သီချင်းအတွက် တရားဝင် ဗီဒီယိုကို Joe Hahn နှင့် Mark Fiore တို့က ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး Linkin Park အဖွဲ့၏ YouTube ချန်နယ်တွင် ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာ ၁၈ရက်က လွှင့်တင်ခဲ့သည်။ ၎င်းဗီဒီယိုတွင် Chester ၏ ပရိသတ်များအလယ် သီဆိုဖျော်ဖြေနေမှုပုံရိပ်များ၊ live show ဖျော်ဖြေနေမှုပုံရိပ်များ၊ ယခင် ဖြန့်ချိခဲ့သော သီချင်းဗီဒီယိုများထဲမှ ပုံရိပ်များ၊ အဖွဲ့၏ ဖြတ်သန်းမှုပုံရိပ်များဖြင့် စီစဉ်တင်ဆက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုပြုလုပ်မှုအတွက် Hahn၏ ပြောစကားများမှာ
“ ဒီ ဗီဒီယိုကို ပြုလုပ်ရတာ အထူးသဖြင့် ကြည့်ရှုရတာ မယုံနိုင်လောက်အောင် ထိခိုက်ခံစားရပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုကို လုပ်နေတုန်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ရရုံသာမက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး လိုအပ်နေသူတွေကို ထိုက်သင့်သလောက်အကျိုးပြုခွင့်ရစေတယ်လို့တော့ ခံစားမိပါတယ်။ Hollywodd Bowl နဲ့ အခြားပွဲတွေအတွက် လုပ်နေတုန်းမှာ အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေ၊ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ အပြင်ဘက်က လူတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ အသိုက်အဝန်းထဲကလူတွေ အကြောင်း စဉ်းစားမိတယ်။ ဒီဗီဒီယိုက လိုအပ်နေသူတွေအတွက်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တစ်စုံတစ်ရာကို ဖော်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ”
ဤဗီဒီယို စတင်လွှင့်တင်ပြီးနောက် ၂၄နာရီအတွင်း ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၃ သန်းအထိရှိခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၂၅ တွင်မူ ၁၀ သန်းကျော်အထိ ရှိခဲ့သည်။
Chester Bennington – တေးဆို
Mike Shinoda – ကီးဘုတ်, ထုတ်လုပ်ရေး
Brad Delson – ဂစ်တာ, ထုတ်လုပ်ရေး
Dave "Phoenix" Farrell – ဘေ့စ်ဂစ်တာ
ဂစ်တာ နှင့် စန္ဒယား Eg White
ရေးသားသူ Mike Shinoda ၊ Francis White
ထုတ်လုပ်သူ Mike Shinoda ၊ Brad Delson
သီဆိုသူ Chester Bennington ၊ Mike Shinoda
↑ Top 40/M Future Releases - Mainstream Hit Songs Being Released and Their Release Dates။
↑ Linkin Park’s Mike Shinoda Talks Pop Co-Writes Radio.com
↑ 102.1 the Edge - FB LIVE - LINKIN PARK, March 17, 2017
↑ Linkin Park Dedicate 'One More Light' to Chris Cornell on 'Kimmel' Fuse
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ One More Light (Official Video) - Linkin Park, September 18, 2017
↑ ARIA Chart Watch #431။ auspOp (July 29, 2017)။ July 29, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Austriancharts.at – Linkin Park – One More Light" (in German). Ö3 Austria Top 40. Retrieved August 3, 2017.
↑ "Linkin Park Chart History (Canadian Hot 100)". Billboard. Retrieved August 3, 2017.
↑ "ČNS IFPI" (in Czech). Hitparáda – Digital Top 100 Oficiální. IFPI Czech Republic. Note: Change the chart to CZ – SINGLES DIGITAL – TOP 100 and insert 201730 into search. Retrieved August 1, 2017.
↑ Le Top de la semaine : Top Singles Téléchargés – SNEP (Week 30, 2017) (in French)။ Syndicat National de l'Édition Phonographique။ July 29, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Archívum – Slágerlisták – MAHASZ" (in Hungarian). Single (track) Top 40 lista. Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége. Retrieved August 3, 2017.
↑ "Archívum – Slágerlisták – MAHASZ" (in Hungarian). Stream Top 40 slágerlista. Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége. Retrieved August 3, 2017.
↑ Classifica settimanale WK 30 (in Italian)။ Federazione Industria Musicale Italiana။ July 29, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ BillboardPH Hot 100။ Billboard Philippines (August 14, 2017)။ August 14, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Portuguesecharts.com – Linkin Park – One More Light". AFP Top 100 Singles. Retrieved August 5, 2017.
↑ "ČNS IFPI" (in Slovak). Hitparáda – Singles Digital Top 100 Oficiálna. IFPI Czech Republic. Note: Select SINGLES DIGITAL - TOP 100 and insert 201730 into search. Retrieved August 1, 2017.
↑ "Swisscharts.com – Linkin Park – One More Light". Swiss Singles Chart. Retrieved July 31, 2017.
↑ "Linkin Park Chart History (Alternative Songs)". Billboard. Retrieved September 14, 2017.
↑ "Linkin Park Chart History (Bubbling Under Hot 100)". Billboard. Retrieved August 3, 2017.
↑ "Linkin Park Chart History (Hot Rock Songs)". Billboard. Retrieved August 4, 2017.
↑ Hot/Modern/AC Future Releases။ All Access Music Group။ 15 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=One_More_Light_(သီချင်း)&oldid=456828" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဧပြီ ၂၀၁၉၊ ၀၈:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။